people Nepal » जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई ‘रेड कार्ड’! जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई ‘रेड कार्ड’! – people Nepal
विभागको ठूलो दायित्व रहेको भन्दै उनले अहिले त्यो पूरा हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाए। ‘विभागको निक्कै ठूलो जिम्मेवारी छ, अहिले त्यो पूरा भएको छैन,’ मन्त्री खनालले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा हामीले गर्ने काम पुग्दो छ कि छैन? तपाईहरु आ–आफ्ना छोराछोरी सम्झेर काम गर्नुस्, समीक्षा आफै गर्नुस्।’
जनस्तरबाट उठेका प्रश्नमा विभाग जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘आफ्नो घेराभित्र रहेर हरेक ठाउँमा अनुगमन र चेकजाँच गर्नुस्,’ खनालले भने, ‘साथ दिने म छु, हरेक ठाउँमा निर्देशनको मात्र भर पर्न पर्दैन।’
पानी, दूध र मुख्य खाद्यवस्तुमा सक्रिय भएर लाग्न आग्रह गर्दै खनालले ६ महिनापछि फेरि समीक्षा गर्ने जानकारी दिए। ‘ल्याब बिग्रेको छ भने भन्नुस्, बजेट र जनशक्ति छैन भने त्यो जानकारी गराउनुस्,’ उनले भने, ‘सबै छ गर्न सकिएन भने त्यो पनि भन्नुस्। अनि के गर्नुपर्छ म गर्छु, कोहीसँग कोही डराउनु पर्दैन।’ राम्रो सुरुवात नभए केहीको पनि गणना नहुने उनको भनाइ थियो।